Horudhac: Sevilla vs Real Madrid… (Los Blancos oo booqanaysa Magaalada Seville, xilli Sergio Ramos uu seegayo kulankan) – Gool FM
(Seville) 05 Dis 2020. Real Madrid ayaa isku dayi doonta inay ka soo kabsato guuldarrooyin is xigxigay marka ay u safarto Andalusia si ay u wajahdo Kooxda Sevilla kulan ku tirsan horyaalka La Ligaha Spain Maqribnimada maanta oo Sabti ah.
Kooxda Tababare Zinedine Zidane oo haatan ku jirta kaalinta afaraad ee La Liga ayaa laga badiyay labadii kulan ee ugu dambeeyay oo ay la kala ciyaareen Alaves iyo Shakhtar Donetsk, halka kooxda kaalinta shanaad ku jirta ee Sevilla ay sidoo kale kulanka la soo galayso natiijo niyad jab leh, kaddib markii ay guuldarro 4-0 ka soo gaartay Chelsea tartanka Champions League.
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 06:15 Maqribnimo xilliga geeska Afrika.
Tomas Vaclik ayaa shaki ku jiraa inuu u ciyaari karo Sevilla, kaasoo qaba dhibaato dhanka jilibka ah, halka Bono uu wali ka soo kabsanayo Korona Fayras, Alfonso Pastor ayaana looga baahnaan karaa inuu booskiisa goosha joogo.
Marcos Acuna ayaa wali shaki ku jiraa dhaawac dartiis, halka Sergio Escudero uu garoomada ka maqnaan doono ilaa bisha Febraayo isagoo xusulka ka jabay, taasoo la micno ah Karim Rekik inuu ciyaari karo daafaca bidix.
Oliver Torres ayaa la rajeynayaa inuu kala wareego Munir weerarka kooxda martida loo yahay, iyadoo Luuk de Jong uu ku soo bilaabanayo booska weerarka.
Dhinaca kale Dani Carvajal ayaa markale ka dhaawacmay Real Madrid, iyadoo daafaca midig uu dhaawac ka soo kabsaday, Lucas Vazquez iyo Nacho ayaa ah dookhyada garabka midig ee kulankan.
Sergio Ramos ayaan ka hor’imaandoonin kooxdiisii hore maadaama uu muruqa ka dhaawacan yahay, macallin Zidane ayaana sheegay inuusan halis gelin doonin daafaciisa, laakiin Eder Militao ayaa diyaar u ah inuu booskiisa buuxiyo haddii loo baahdo kaddib markii uu ka soo kabsaday Korona Fayras.
Eden Hazard ayaa dhaawac ku maqan kulankan, taasoo la micno ah in Martin Odegaard uu taageeri karo labada afka hore ee Los Blancos, Karim Benzema iyo Marco Asensio.
>- Sevilla ayaa barbaro gashay qeybta hore ee ciyaarta, isla markaana guuleysatay ciyaarta oo dhammaystiran shan ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka La Liga ku ciyaartay garoonkeeda.
>- Real Madrid ayaa barbaro gashay qeybta hore ee ciyaarta, isla markaana guuleysatay ciyaarta oo dhammaystiran saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday kooxda Sevilla tartammada oo dhan.
>- Sevilla ayaa guuleysatay lix ka mid todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Real Madrid ayaa guuleystay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Sevilla tartammada oo dhan.
>- Kooxda Real Madrid ayaa guuldarro la’aan ah oo aan la garaacin 10 ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka La Liga ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.